गीतकार नरेन्द्र घर्ती ए प्लास्टिक एनिमिया रोगबाट पीडित, बचाउ अभियानमा सहयोग गर्न अपील ! – ebaglung.com
गीतकार नरेन्द्र घर्ती ए प्लास्टिक एनिमिया रोगबाट पीडित, बचाउ अभियानमा सहयोग गर्न अपील !
२०७५ श्रावण ७, सोमबार १०:०७	Top News, थप समाचार
खगेन्द्र विश्वकर्मा, बागलुङ (ताराखोला) २०७५ साउन ६ । ताराखोला गाउपालिका वडान ५ मा जन्मि हुर्किएका गितकार नरेन्द्र घर्ती अहिले अस्पतालमा छन् ।उनलाई ए प्लास्टिक एनिमिया (शरिरमा रगत उत्पादन नहुने) रोग लागेको डाक्टरले बताएको छन् ।
रोजगारको शिलशिलामा साउदिमा कार्यरत उनलाई २ महिना पहिलेनै रोग लागेको पत्ता लागी उपचार गराईरहेका थिए आखिर कम्पनीले उनलाई नेपाल फर्काईदिएको छ । उनि नेपाल आएको हप्ता दिन भएको छ । काठमाडौको सिविल अस्पताल बानेश्वरमा उपचार गराउदै छन् ।उपचारको लागि करिवन ३० लाख रुपैयाँ लाग्ने डाक्टरले बताएको नरेन्द्र घर्तीले बताए ।
घर्तीको बुबा आमा पहिलेनै निधन भैसकेको छन । अहिले उनको साथमा उनकी श्रीमती छिन् । सामान्य परिवारमा भएकोले उपचारको लागि ठुलो रकम जुटाउन सहयोग माग्नुपर्ने बाध्यता छ भने स्वास्थमा सरकारको ठुलो औसधी उपचार हेरचाह पनी छैन । उपचारको लागी ३०लाख जुताउन सहयोगको आवश्यक छ । उनी १० बर्षे जनयुद्धमा जनकलाकारको रुपमा सहभागी भै काम गरेका थिए । भने पछि समय एल्वम मार्फत आफ्नो गीतियात्रा अगाडि बढाएका थिए । त्यसपछि आधुनिक तथा लोक गित लेख्दै गाउदै आएका छन् । उनकी श्रीमती शारदा घर्ती पनी लामो समय जन कलाकारितामा रहेकी र हाल अखिल नेपाल जनकलाकार संघको केन्द्रीय समितिमा रहेकोले जन कलाकार संघले आर्थिक रकम संगलनको लागी पहिलो चरणमा पत्रव्दारा निवेदन गरेको अखिल नेपाल जनकलाकार संघका अध्यक्ष कर्ण परियार विद्रोहीले बताए।
सहयोग रकम नरेन्द्र घर्तीको श्रीमती शारदा घर्तीको प्रभु वैङ्को खाता नम्बर९१६१०१००१०४८२६९०००००१० रकम जम्मा गर्न सकिन्छ । सहयोग रकमको जानकारीको लागि ९८४७६१३९६५,९८४३८३८१२७ मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।
यसै खालको रोग नेपाल पत्रकार महासंघ बागलुङ शाखाका कोषा अध्यक्ष विजय रानालाई पनि लागेको छ हाल उनको उपचार भैराखेको र स्वास्थ अवस्था सुधार भै रहेको छ ।